ပန်းချီပညာရှင် Stephen Wiltshire
Stephen Wiltshire ဆိုတာ Cityscapes ကို ကောင်းကောင်းရေးဆွဲနိုင်တဲ့ ပန်းချီပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ သူရဲ့စွမ်းရည်က အထူးသဖြင့်မြို့တစ်မြို့ပုံကို အသက်ဝင်အောင်ပြန်ဆွဲနိုင်တာပါပဲ။ သူရဲ့အနုပညာမှတ်တိုင်အဖြစ် ၂၀၀၆ မှာ MBE ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Pablo Escobar ဆိုတာ Colombian မူးယစ်ရာဇာတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့မူးယစ်ရာဇာဘဝမှာ အမြင့်ဆုံးစံချိန်ဖြစ်တဲ့ Cocaine 80 % လောက် U.S ကို မှောင်ခိုသွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေမှာ…
ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Denis Suarez?
ဒီကိစ္စက Arsenal ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ ဒွိဟဖြစ်စေမယ့် စကားပါ။ ဘယ်သူမဆိုကိုယ့်အသင်းကို အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါ့လိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးတွေမရတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် အရာတွေကို ရွေးချယ်ရမှာပါပဲ။ ဒီလိုပဲ Denis Suarez…
ဟာသသရုပ်ဆောင် အရှည်ကြီး ဆိုတဲ့ ဦးကင်းကောင်
ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးကင်းကောင်က ယနေ့ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ချွဲကြပ်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပုပ္ပါးမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလို့ ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားခဲ့တာပါ။
Robin Williams ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ?
Robin Williams ဆိုတာ အမေရိကန်မင်းသား၊ လူရွှင်တော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အမေရိကန်ဟာသလောကမှာ တစ်ခေတ်တစ်ခါကနာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မက်တပ်ရပ်ဟာသပြောတဲ့အခြေအနေကနေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဘဝကို ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့သူပါ။ 90 born တွေကတော့ ကောင်းကောင်းကြီးမှီခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။
သွေးအေးကစားသမားတစ်ဦး သို့မဟုတ် Sergio Busquets
Busquets ဆိုတာ Spain နဲ့ Barcelona ကွင်းလယ်ခံစစ်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါစက်တစ်လုံးပါ။ ကွင်းလယ်ခံစစ်ကို အဖျက်သီးသန့်ဆော့တဲ့ ရာဇဝင်ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့။ တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်တွဲလုံးတွေကို အကောင်းဆုံးဟန့်တားပြီးရင် အလှအပအယိမ်းအနွဲ့တွေနဲ့…